Switzerland onye na-emepụta elekere anya okomoko GC ẹkedori ya mbụ gam akporo Wee smartwatches | Gam akporosis
Switzerland okomoko nche emeputa GC ẹkedori ya mbụ gam akporo Wear smartwatches
Ọ dị ka smartwatch realm na-abịa ndụ, ọkachasị mgbe mwepụtara nke gam akporo Wear 2.0, sistemụ arụmọrụ "wearable" nke na - enye smartwatches ohere ịnwekwu nnwere onwe karịa na smartphones nke ha jikọtara.
Ugbu a onye na-eme ọhụụ ọhụụ ọhụụ Switzerland, GC, dị njikere ịbanye na mpaghara a nke gam akporo Wear smartwatches na ụfọdụ ndị tụleerịrị na ọ ga - amalite "jupụta" na akara nke elekere amamịghe nke ga - ahụ ìhè ụbọchị na njedebe nke 2017.
Dị ka ihe ọmụma ahụ si dị bipụtara site n'etiti Pocket-lint, ngwaọrụ ndị ga-eme ka GC Connect line of smart watches ga-adị n'ụdị nke GC Structura nche. Jikọọ smartwatches ga-enwe a egbu maramara igwe anaghị agba nchara ikpe.
Igwe smartwatches okomoko nke a ga-enye na ụdị maka ma nwoke ma nwanyị ke gold ye okpoho. Na mgbakwunye, mbipute GC Jikọọ ụmụ nwoke ga - egosipụta a black seramiiki mgbanaka gburugburu gị na ihuenyo.
N'ime, elekere ga-ejikọta a Qualcomm Snapdragon Yiri 210 processor0, mana enweghi ihe omuma banyere RAM ha gha eji ma obu banyere ebe ha di n’ime ya.
Akụkụ ọzọ, maka oge ahụ, amaghịkwa: ọ bụrụ na ha ga-enwe atụmatụ dịka njikọta mkpanaka LTE dịka na LG Watch Sport ma ọ bụ mgbawa NFC nke na-eme ka ịkwụ ụgwọ ekwentị.
Versiondị nwoke nke GC Connect ga-apụta ụdị eriri dị iche iche Ndị a gụnyere eriri silik ojii, eriri akpụkpọ anụ agụ iyi, na ndị ọzọ. Versiondị ụmụ nwanyị ga-abịakwa na eriri nke ya, ya na mgbaaka na-egbu maramara.
Pnye ọnụahịa na ụbọchị ntọhapụ maka ndị a GC Jikọọ gam akporo Wee smartwatches ka a ga-ekwusara ma ọ ga-ekpughe nkọwa ndị ọzọ n'izu a ka ngosi ngosi Baselworld ga-ewere ọnọdụ na Switzerland.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Switzerland okomoko nche emeputa GC ẹkedori ya mbụ gam akporo Wear smartwatches